မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Shanghai Gianty Trading Co. , Ltd.
1. သင်၏အပြည့်အဝဆွေးပစ္စည်းကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းသည်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
၎င်းသည်ပြောင်းဖူး၊ အာလူးနှင့်ကြံကဲ့သို့သောဓာတ်ကူပစ္စည်းမှဆင်းသက်လာသည့် polylactic acid (PLA) မှပြုလုပ်ထားသောဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် BPA အခမဲ့ဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ဆွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်။ အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးနိုင်သည်။
2. အဘယ်ကြောင့် PLA ထုတ်ကုန်ရေရှည်တည်တံ့ကြသည်?
PLA ကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောစက်ရုံမှပြုလုပ်သည်။ PLA ထုတ်ကုန်များကိုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆွေးခန်းများဖြင့်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအခြားအစဉ်အလာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများကဲ့သို့သောအမှိုက်ပုံများမှစွန့်ပစ်နိုင်သည်။
PLA ထုတ်ကုန်များကိုစက်မှုဆွေးစက်ရုံတွင်စွန့်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်တသမတ်တည်းအစိုဓာတ်အခြေအနေများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အိမ်နောက်ဖေးတွင်ပုံမှန်ပြုလုပ်သောမြေဆွေးများတွင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏ compostable ထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ compostable ပစ္စည်းများ compostability များအတွက် ASTM စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ၎င်းတို့သည်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံသည့်စံချိန်စံညွှန်းများကိုအသုံးပြုသည့် Biodegradable Products Institute (BPI) မှသတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိပါကထုတ်ကုန်များတွင် BPI အမှတ်တံဆိပ်မပါ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့် BPI Certified ဟူသောစကားလုံးများကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည်စီးပွားဖြစ်စက်ရုံတစ်ခုတွင်ပြိုကွဲလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CPLA ထုတ်ကုန်များသည်လေးလံသောအပူနှင့်မြင့်မားသောအပူခံနိုင်မှုတို့ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်းသုံးကိရိယာသည်အသားသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့သောခက်ခဲသည့်အစားအစာများကိုဖြတ်တောက်ခွင့်ပြုသည်။
ဟုတ်တယ်။ အပြည့်အဝပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစက်ရုံအခြေပြုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်စီးပွားဖြစ်စက်ရုံများမှသူတို့ကိုမဆွေးမနိုင်လျှင်ပင်မှန်ကန်သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများမှာအစဉ်အလာပလတ်စတစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချခြင်းနှင့်၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုလျော့နည်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ စမ်းသပ်ထုံးစံနမူနာများသောအားဖြင့်အကြောင်းကို6ရက်ထွက်လာ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်မှိုစက်ရုံရှိခြင်းကြောင့်မှိုဒီဇိုင်းနှင့်မှိုထုတ်လုပ်မှုသည် ၃၅ ရက်သာကြာသည်။
၈။ Gianty နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် Gianty မှမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောစီးပွားရေးပုံစံနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ BIONEO သည်လက်လီထုပ်များနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောညစာစားပွဲများနှင့်အတူ E-commerce လုပ်ငန်းအတွက်သင့်လျော်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ဟူနန် - ဥရောပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလမ်း - ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ - ရထားလမ်းသည်ဟူနန်စက်ရုံမှဥရောပသို့ဖြန့်ကျက်သည်။ ဤရထားလမ်းအသစ်အားဖြင့်ဟွန်းတရုတ်မှဥရောပနိုင်ငံများသို့ကွန်တိန်နာများကိုပျမ်းမျှ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိသာကြာမြင့်သည်။ တရုတ်အရှေ့ပိုင်းဆိပ်ကမ်းများမှသမုဒ္ဒရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်ရက်ပေါင်း ၂၀ ပိုတိုသည်
၁၀။ Gianty ကိုတန်ဖိုးထားရန်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ နိုင်ငံတကာမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များထံမှကမ်းလှမ်းမှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂေဟစနစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်စားသုံးကုန်ကြမ်းလုပ်ငန်းအတွက်ပါ ၀ င်သူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။